DOWNLOAD Lufthansa Pack FSX & P3D - Rikoooo
FSX - diyaarinta
Downloads 70 406
Waxay abuureen 01-06-2012
Author: Project Airbus & Project OpenSky & Skyspirit & Pack ka ricardo_tv
Download Wixii FSX & Steam Edition & P3D v1. * v2 v3 in la baaro# Caymiska FSX iyo / ama P3D # 3D Cockpit Virtual
pack fiican oo ay ku jiraan Boeing B737-500, B747-400, B747-800i iyo Airbus A380-841 (oo dhan la VC iyo dhawaaqyada) in midabada Lufthansa.
In doorashada category ee FSX / P3D u dooro "Lufthansa Pack"
Deutsche Lufthansa AG (FWB: LHA, OTCQX: DLAKY) (ku dhawaaqida Jarmal: [dɔʏt͡ʃə lʊfthanza]) waa side calanka of Germany iyo diyaaradaha ee ugu weyn Yurub marka la eego guud ahaan rakaab qaadeen oo size raxan. Dawladda Jarmalka lahaa% saamiga 35.68 ah ee Lufthansa ilaa 1997, laakiin shirkadda ayaa hadda leedahay maal-gaarka ah (88.52%), MGLCutubka Gesellschaft für Luftverkehrswerte (10.05%), Deutsche Postbank (1.03%), iyo Deutsche Bank (0.4%) oo uu leeyahay shaqaale 37,042 (sida of March 2007). Magaca shirkadda ka qayib Luft (erayga Jarmal for "hawada"), iyo Hansa (ka dib markii Hanseatic League, kooxda ganacsiga Dr Makumbe awood).
airline waa airline afaraad ee ugu weyn marka la eego guud ahaan rakaab qaadeen, ka hawlgala adeegyada ay u 18 dalal gudaha iyo 203 dalal caalamiga ah ee dalalka 78 Afrika, Ameerika, Aasiya iyo Yurub ee dunida. Si wadajir ah la-hawlgalayaasheeda, adeegyada Lufthansa agagaarka dalal 410.  Iyadoo in ka badan 710 diyaarad u leedahay diyaaradaha labaad ee ugu wayn rakaabka adduunka marka la isku daro ay shuraakada.
xafiiska Lufthansa ee diiwaangashan iyo xarunta shirkadaha waa in Deutz, Cologne, Germany, iyadoo ay saldhig weyn ee hawlgallada (Lufthansa Aviation Center (LAC) iyo xarun gaadiidka hoose garoonka Frankfurt ee Frankfurt ahay Main la xarun labaad garoonka Munich. Inta badan doonniyawadayaashaada Lufthansa ee , shaqaalaha dhulka, iyo midiidinnadiisa duulimaad ku salaysan yihiin in Frankfurt.
Lufthansa waa xubin aasaase ah Star Alliance, Isbahaysiga ee dunida ugu weyn airline, aasaasay in 1997. Group Lufthansa waxaa ka shaqeeya dad 117,000 adduunka oo dhan ah oo dalal 146. In 2010, in ka badan 90 million rakaab duulay la Lufthansa (ma ku jiraan Germanwings iyo Brussels Airlines). Source Wikipedia.
Video: Lufthansa by Polo91240 for Rikoooo.com
Lufthansa Pack FSX & P3D Download
Flight Qabille 2004
Aerospace Fletcher FU24 950 Taxanaha FSX & P3D - v3
Lockheed PV-2 Harpoon - Bixinta Gold FSX & P3D
Ingiriis Canberra B-57B FSX & P3D
Pilatus PC-6C H2 Hantidhowrka FSX & P3D
Lockheed PV-2 Qalabka dab damiska ee Harpoon FSX & P3D
Helay heegan virus ah?
Waa caadi in files qaar ka mid ah (exe) on Rikoooo in la digay barnaamijka anti-virus qaar ka mid ah sida laga yaabo cudurka. First ha argagixin, in aad ogaan jiraan Weligeed ma virus hal on Rikoooo tan iyo markii ay Abuuridda (in ka badan 12 sano). Dhab ahaantii, tani waxaa la yiraahdaa been ah positive, faahfaahin dheeraad ah halkan